ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အိမ်နီးချင်းများကိုကူညီပါ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အိမ်နီးချင်းများကိုကူညီပါ
အပေါ် Posted မတ်လ 29th, 2020
နံနက် ၈ နာရီတွင်Aprilပြီလ ၂၉ ရက်ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့အနီးအနားရှိ Dutchtown နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လတ်တလောဥပဒေကြမ်းများနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးမျိုးသောငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဒေသခံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများကိုဖြိုခွဲရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အိမ်နီးချင်းများအတွက်
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများကိုငွေပေးချေခြင်း
အဆိုပါ CARES အက်ဥပဒေ (Coronavirus အကူအညီ၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးအက်ဥပဒေ) သည်တစ် ဦး ချင်းစီအားမိသားစုများအတွက်ငွေသားပုံစံဖြင့်တိုက်ရိုက်ကယ်ဆယ်ရေးကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး COVID-19 အပြီးတွင်အလုပ်ဆုံးရှုံးသွားသောသူများအားကူညီရန်အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များကိုတိုးချဲ့ပေးမည်။
တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀ ထက်နည်းသောဝင်ငွေရှိသူတစ် ဦး သည်တစ်ကြိမ်ငွေဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ပေးသင့်သည်။ သင်လက်ထပ်ပါကအိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး စီသည်ထိုပမာဏကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ကလေးများရှိပါကကလေးတစ် ဦး စီသည်အပိုဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ သင်၌ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ထက်နည်းသောအိမ်ထောင်သည်မိသားစုတွင်သင်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၃,၄၀၀ ရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏မိသားစုသည်ထိုထက်ပိုပြီး ၀ င်ငွေရရှိပါကသင်ရရှိသောငွေပမာဏလျော့ကျသွားပြီးဒေါ်လာ ၁၉၈၀၀၀ ကျော်သောမိသားစုများသည်မည်သည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုမှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) လူမှုဖူလုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဌာနရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အချက်အလက်ပေါ် မူတည်၍ ချက်လက်မှတ်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ပေးပို့လိမ့်မည်။ အဆိုပါငွေကိုကြိုတင်အခွန်အကြွေးအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်အကြောင်းပြောရမယ်၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် ဖက်ဒရယ်ဝင်ငွေခွန်, မစ်ဆူရီပြည်နယ်ဝင်ငွေခွန်နှင့် စိန့်လူးဝစ်၏စီးတီးဝင်ငွေခွန်အခွန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိတိုးချဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုံစံနှင့်အစီရင်ခံမှုပုံစံအမျိုးမျိုးမှာရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကအခွန်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
CARES အက်ဥပဒေတွင်အစားအစာနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအတွက်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေများပါဝင်ပြီးမစ်ဆူရီပြည်နယ်သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်ဟုယူဆသည်။ ဤသည်တိုးမြှင့်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပါဝင်သည် SNAP အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ယခုအိမ်တွင်ရှိနေသောကျောင်းရှိကလေးများရှိသည့်မိသားစုများအတွက် SNAP ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။ လာကြည့်ပါ မစ်ဆူရီလူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဌာန updates များကိုစစ်ဆေးရန်။
CARES အက်ဥပဒေသည်ကလေးစောင့်ရှောက်သူများအပါအ ၀ င်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအား Pandemic Unemployment Assistance အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အလုပ်လက်မဲ့အာမခံပေးငွေများကိုတစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာ ၆၀၀ တိုး။ တိုးလာနေသည်။ ဒီမှာ Missouri အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်အတွက်ဖိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
မစ်ဆူရီကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရကဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေသောဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးချေးငွေလျှောက်ထားပါ ပုံမှန်အားဖြင့်မီး၊ ရေကြီးမှုသို့မဟုတ်အခြားရာသီဥတုအခြေအနေများကဲ့သို့သောအရာများအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။ ရရှိနိုင်သောငွေပမာဏကိုလည်း CARES အက်ဥပဒေအရတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးထိခိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်ချေးငွေများရရှိရန်အတွက် COVID-19 ၏ဘဏ္impactာရေးသက်ရောက်မှုကိုအခြေခံသည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အတိုးနှုန်းမှာ ၃.၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အတိုးနှုန်းမှာ ၂.၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ SBA ငွေပေးချေမှုကိုနှစ်ပေါင်း ၃၀ အထိအများဆုံးတတ်နိုင်စေရန်နှင့်အခက်အခဲများမရှိဘဲဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဘဏ္abilityာရေးအရမတတ်နိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုရေရှည်ပြန်ဆပ်သောချေးငွေများကိုပေးသည်။
COVID-19 ကြောင့်အကြွေးများ၊ လုပ်ခလစာများ၊ ပေးဆောင်ရမည့်စာရင်းများနှင့်အခြားငွေတောင်းခံမှုများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောချေးငွေများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူရန်နှင့်လျှောက်ထားရန်၊ အွန်လိုင်းပေါ်တယ်ကိုသွားပါ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် ၀ ယ်လိုအားနှေးကွေးစေပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြိုလဲသွားသည်ကိုသတိပြုပါ။
လျှောက်ထားသူများသည်အွန်လိုင်းမှလျှောက်ထားနိုင်သည်၊ နောက်ထပ်ဘေးအန္တရာယ်အကူအညီပေးရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်သည် SBA ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်။ လျှောက်ထားသူများသည် SBA ၏ Customer Service Center သို့လည်းဖုန်းဆက်နိုင်သည် 800-659-2955 သို့မဟုတ်အီးမေးလ် accidentcustomerservice@sba.gov SBA ဘေးအန္တရာယ်အကူအညီများနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။ နားမကြားသောသို့မဟုတ်နားကြားရန်ခက်ခဲသောသူများအားဖုန်းခေါ်နိုင်သည် 800-877-8339.
လျှောက်ထားသူများကို SBA Disaster loan portal မှတဆင့်ဆက်လက်လျှောက်ထားရန်အကြံပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများသည်အချို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စက္ကူဖောင်ပုံစံများကိုပုံနှိပ်။ အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်တင်ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးစီးသောလျှောက်လွှာများကိုအမေရိကန်အသေးစားစီးပွါးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ငွေပေးချေရေးဌာန၊ ၁၄၉၂၅ Kingsport လမ်း၊ Fort Worth, Tx ။ , 14925 သို့ပို့သင့်သည်သို့မဟုတ်သို့အီးမေးလ်ပို့သင့်သည်။ accidentloans@sba.gov.
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ်ဒေသဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျေးဇူးပြု မကြာခဏပြန်စစ်ဆေးပါ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုရန်။
ကျေးဇူးပြု ဒေသဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုစစ်တမ်းဖြည့်စွက် စိန့်လူးဝစ္စဒေသဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်းက၎င်းတို့အားဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့မည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိမည်ကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိတ်ဖက်, ပြီးနောက် စိန့်လူးဝစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ဦးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြတယ် သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထိ $ 5,000 ၏သုညအတိုးနှုန်း COVID-19 အကြပ်အတည်းကြောင့်စီးပွားရေးပျက်စီးမှုများကိုထိန်းသိမ်းထားသောစိန့်လူးဝစ္စမြို့နှင့်စိန့်လူးဝစ္စကောင်တီတို့တွင်တည်ရှိသည်။ ချေးငွေအသေးစိတ်ကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒီမှာငွေချေးယူပါ။ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ်ပို့ပါ bizhelp@stlpartnership.com.
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ်လူထုဖောင်ဒေးရှင်း အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအရာများကိုကူညီရန်ရန်ပုံငွေနှစ်ခုတည်ထောင်ထားသည်။
အဆိုပါ Gateway မှာခံနိုင်ရည်ရန်ပုံငွေ ဒေသတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားကာလတိုငွေကြေးသက်သာမှုကိုကူညီလိမ့်မည်။
အဆိုပါ ဒေသဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရန်ပုံငွေ ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အထီးကျန်သူများအပါအ ၀ င်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများအားအကူအညီပေးရန်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အမေရိက၏ SBDC —Misouri
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည် COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေများအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကူညီရန် မစ်ဆူရီအသေးစားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာ (SBDC) တွင်ဘဏ္financialာရေးထိခိုက်မှုရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကြံပြုချက်များရှိသည်။
ပထမမိသားစုများ Coronavirus တုံ့ပြန်မှုအက်ဥပဒေ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၀ န်ထမ်းထွက်ခွာရန်
သင့်တွင် ၀ န်ထမ်းများရှိပါကမိသားစုဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွင့်ရက်အက်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲမှုအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်း ၅၀ (သို့) ထိုထက်မကသောဖုံးအုပ်ထားသည့်အလုပ်ရှင်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ Emergency Paid Mick Leave အက်ဥပဒေ (EPSLA) ကအချိန်ပြည့်အလုပ်သမားများအား coronavirus နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အလုပ်လုပ်ရန်အစီရင်ခံရန်မဖြစ်နိုင်သည့် အချိန်မှစ၍ ၂ ပတ်အထိသူတို့၏အပြည့်အဝလစာကိုလုပ်ခပေးအပ်ရန်ခေတ္တပြဌာန်းထားသည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်း ၅၀၀ ထက်နည်းသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသက်ဆိုင်သည်။
ထို့အပြင်အသစ်စက်စက်ဥပဒေဖြစ်သောအရေးပေါ်မိသားစုနှင့်ဆေးခွင့်ခွင့်ရက်ခွင့်တိုးချဲ့အက်ဥပဒေသည်အလုပ်ရှင်မှအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၃၀ (ခွင့်ရက်၏ပထမနေ့မတိုင်မီ) တွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရန်မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို (၁၂) ပတ်အထိခွင့်ပြုထားသည်။ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း (သို့) တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခြင်းမပြုရသေးသော ၀ န်ထမ်းသည်ကလေး၏ကျောင်းသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်မှုနေရာအားပိတ်ထားလျှင် (သို့) အများပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကလေးစောင့်ရှောက်သူမရရှိနိုင်ပါက ၀ န်ထမ်း၏ကလေး (အသက် ၁၈ နှစ်အောက်) ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ၀ န်ထမ်းသည်အချိန်ပြည့်ဖြစ်စေ၊
၏ပထမ ဦး ဆုံး 10 ရက် EFML မပေးဆပ်ရသေးပါ။ ဤ ၁၀ ရက်တာကာလအတွင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည် ၁၀ ရက်ကြာမရသောကာလသို့မဟုတ်အချို့သောရက်များကိုဖုံးအုပ်ရန်အတွက် (အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်ဖျားနာခွင့်ကဲ့သို့) မည်သည့်စုဆောင်းထားသည့်လစာကိုအစားထိုးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းအားလခအားအစားထိုးခွင့်ပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ၁၀ ရက်ကြာပြီးနောက်အလုပ်ရှင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောနာရီအရေအတွက်အတွက် ၀ န်ထမ်း၏ပုံမှန်နှုန်းထား၏သုံးပုံနှစ်ပုံတွင်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ အက်ဥပဒေအသစ်အရဒီလစာရပိုင်ခွင့်ကိုတစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်အလုပ်သမားတစ် ဦး လျှင်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိကန့်သတ်ထားသည်။
အလုပ်ရှင်များသည်ဒေါ်လာအခွန်ခရက်ဒစ်အတွက်ဒေါ်လာတစ်မျိုးမျိုးကိုပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်ကပြက္ခဒိန်သုံးလပတ်အတွက်ပေးသောဖျားနာမှုအတွက် ၁၀၀% နှင့်ညီမျှသောပမာဏဖြင့်ပြန်အမ်းနိုင်သည့်အခွန်ငွေကိုခွင့်ပြုထားသည်။ လူမှုဖူလုံရေးအခွန်၏အလုပ်ရှင်၏အချိုးအစားကိုခရက်ဒစ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သော ဦး ထုပ်များနှင့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, နေမကောင်းခွင့်များအတွက်ပြန်အမ်းငွေအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ရပ်ပေါ်မူတည်။ တစ်နေ့လျှင် $ 100 နှင့် $ 200 အကြားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဖျားနာခွင့်အတွက်နှစ်ပတ်တာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အက်ဥပဒေတွင်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာနမှကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်သူများအားထိုခွင့်ကိုယူနိုင်သောအလုပ်သမားများအနက်မှထုတ်ပယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဘာသာစကားများပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါကခွင့်ပြုချက်သည်သူတို့၏လုပ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်နိုင်ပါက ၀ န်ထမ်း ၅၀ ထက်နည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည်။ စီးပွားရေး။ ဤကင်းလွတ်ခွင့်သည်မည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေသည်၊ နှစ်ပတ်အတွင်းခွင့်မပေးရခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဥပဒေအားပြောင်းလဲမှုသည်ရှုပ်ထွေးပြီးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီအရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ဘဏ္ာရေးမှူး Tishaura Jones နှင့် Don Calloway တို့သည်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့များနှင့် ပတ်သက်၍ နက်နက်နဲနဲဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဗီဒီယို.
မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု ယူနေတယ် စစ်တမ်း ဒေသခံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသောပြissuesနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်ရန်ကူညီရန်မစ်ဆူရီရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်း။
MMSC အပတ်စဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေသည်။ ပင်မအပေါ်နံနက်ခင်းပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၈:၃၀ နာရီ၊ COVID-8 အကျပ်အတည်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အခြားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရပ်ကွက်များမည်သို့လိုက်လျောညီထွေရှိကြောင်းလေ့လာပါ။
MMSC သည်မကြာသေးမီကလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် DT2 Downtown Dutchtown အားပြန်လည်အားဖြည့်ရန် UrbanMain Initiative သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သူတို့ရဲ့ဖန်တီးခဲ့သည် အိမ်နီးချင်းကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ ရပ်ကွက်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များနှင့်ဒေသခံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် COVID-19 အကျပ်အတည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်မှုအတွက်အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု တရားဝင်နှင့်အလွတ်သဘောရပ်ကွက်အတွင်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အလားတူအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ The CDC တည်ငြိမ်မှု ရပ်ရွာအခြေပြုရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အဓိကလည်ပတ်မှု၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျန်းမာသောပတ် ၀ န်းကျင်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ထောက်ပံ့ငွေကိုရရှိနိုင်သည်။ ပြီးနောက် အိမ်နီးချင်းအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မသည် ၀ န်ထမ်းများ၊ အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ရပ်ကွက်မှအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေကိုရနိုင်သည်
အဆိုပါ ခြာရိုကီလမ်းအသိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်မှုခရိုင် နှင့် ခြာရိုကီ -Lemp အထူးစီးပွားရေးခရိုင် GoFundMe တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီ၊ Uprok4ခြာရိုကီလမ်းခြာရိုကီလမ်းရှိဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅၀ ကျော်နှင့်၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုကူညီရန်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြည့်စွက် အကူအညီရရန်။
တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုသင်သိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ ဒါဆိုငါတို့သူတို့ကိုပေါင်းထည့်နိုင်တယ်။
စာရင်းတစ်ခုပါသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားစာမူကိုလည်းသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် သင်ကူညီနိုင်သည့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း။
အောက်မှာ Filed Covid-19. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Covid-19, DT2နှင့် ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 14th, 2020 .
ဒိန်းမတ် Covid-19 ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အိမ်နီးချင်းများကိုကူညီပါ